Chevrolet silicone na-ekpuchi 4 bọtịnụ
Nkọwa:Chevrolet Silicone Key Cover 4 Buttons,Silicone Chevrolet Key Cover 4 Buttons,4 Bọtini mkpuchi Silicone Key Cover Chevrolet
Home > Ngwaahịa > Cover Cover Silicone Key Chevrolet > Chevrolet silicone na-ekpuchi 4 bọtịnụ
Ihe Nlereanya.: BE122501
Anyị mara mma ụwa co, Ltd nwere ụlọ ọrụ anyị ma mepụta Chevrolet Silicone Cover Cover maka 7 afọ. Ugbu a, Ụlọ Nche Silicone Car we produce bụ magnetik, durable.fashion. Chevrolet silicone mkpuchi mkpuchi bụ otu n'ime ahịa kasị mma nke Ụlọ Nche Silicone Car Key n'ihi na ọ na-emetụ aka, na-enweghị isi, na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. Isi mkpuchi Chevrolet na -achọkwa nnukwu ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka Onye na-ejide ya na Silicone Car Key Holder
1. Ejiri 100% siliki
2. Ụgbọ ala roba ahaziri mkpuchi onyonyo mkpuchi onu ogugu kacha mma maka ikpa ugboala Chevrolet silicone .
3. Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla isi mkpuchi akpaaka dị ka ịchọrọ.
4. Anyị nwere uru ọnụahịa nke isi mkpuchi siliki ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu.
1. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 440 centigrade.
6. Ihe ntinye igodo nso nwere njirimara nke enweghi ihe ojoo, gburugburu ebe obibi nke enyi, ihe ngbochi nke oku, ihe siri ike, ihe mmiri na-ekpuchi, uzuzu uzuzu.
Silicone magnetik ụgbọ ala isi cover maka Chevrolet bụ ọ dịghị nsogbu na environmentally friendly.When ị jide a Chevrolet silicone isi cover n'aka gị, ọ na-ele soft, ezigbo onye na light.You ga-n'anya na akpaaka embossed onye na-ejide ya mgbe ị nwere ya.
Ị ga -ahụ bọtịnụ akpaaka 4 ájá - àmà silicone jel ụgbọ ala isi cover mgbe ị nwere ya.
100% nri mkpụrụ osisi silicone bụ enyi mmadụ
1. 1. akpa ọkpụkpọ ụgbọala Ford na akpa akpa akpa
2. 1000pcs silicone Ford ụgbọ ala akpa akpa ke kiet ke otu katọn
3 Bọtu ụzọ Chevrolet Mpempe ụgbọala na-ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
Ụgbọ ala Chevrolet Silicone Remote Chevrolet Kpọtụrụ ugbu a
Ụgbọala Ngwa 2018 Cover Cover N'ihi Chevrolet Sail Kpọtụrụ ugbu a
Epeepe mkpuchi Silicone maka Chevrolet Sail Car Kpọtụrụ ugbu a
2018 Cover Cover Cover Car Chevrolet Sail Kpọtụrụ ugbu a
Chevrolet Colorado Aveo Cruze na Car Logo Kpọtụrụ ugbu a
Ekpuchi Chevrolet Dị Elu 3 Mpị Kpọtụrụ ugbu a
New Chevrolet Cruze 3 Buttons Car Ngwa Kpọtụrụ ugbu a
Chevrolet Silicone Key Cover 4 Buttons Silicone Chevrolet Key Cover 4 Buttons 4 Bọtini mkpuchi Silicone Key Cover Chevrolet Chevrolet Silicone Key Cover Obere Silicone Car Key Cover 2 Buttons Chevrolet Silicone Car Key Cover Chevrolet Sochie Silicone Key Cover Chevrolet Captiva Silicone Key Cover